खेलकुद Archives - Page3of 155 - Deshko News Deshko News खेलकुद Archives - Page3of 155 - Deshko News
घरेलु दर्शकमाझ आज नेपालले भारतको सामना गर्दै, हेड टु हेडमा को बलियो ?
काठमाडौं, भदौ १७ नेपाली फुटबल टोलीले आज (बिहीबार) भारतीय फुटबल टोलीको सामना गर्दै छ। खेल त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा अपरान्ह ५ बजे शुरु हुनेछ। मैत्रीपूर्ण यो खेलमा नेपाललाई घरेलु दर्शकको साथ
अल्मुताइरी भन्छन्, ‘आई एम आउट’
काठमाडौं, साउन १० नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले राजीनामा दिने संकेत गरेका छन्। अल्मुताइरीले बुधवार फेसबुक स्ट्याटसमार्फत आफूले राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षण छाड्न सक्ने संकेत गरेका हुन्। उनको
मेसी र पिएसजी सम्झौता नजिक, कति पाउँछन् पारिश्रमिक ?
एजेन्सी, साउन २६ फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मन (पिएसजी)ले अर्जेन्टिनी स्ट्राइकर लियोनल मेसीलाई अनुबन्ध गर्ने चर्चा चलिरहेको छ। यसका लागि पिएसजीले आफ्ना १० खेलाडीलाई ‘ट्रान्सफर लिस्ट’ मा राख्ने भएको छ।
मेसी किन बार्सिलोना छोड्न तयार भए ?
काठमाडौं, साउन २२ अर्जेन्टिनी फुटबल स्टार लियोनल मेसी फुटबल क्लव बार्सिलोना छाड्ने भएका छन् । क्लबले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मेसी बार्सिलोनामा नबस्ने जनाएको हो । विज्ञप्तिमा क्लव र मेसीबीच
काठमाडौं, साउन १९ पूर्व कप्तान पारस खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत खड्काले यसबारे जानकारी दिएका हुन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटरका रुपमा मेरो यात्रा टुंगिएको छ तर
एजेन्सी, साउन ४ इङ्ग्ल्यान्डले दोस्रो टी–ट्वान्टी क्रिकेटमा पाकिस्तानलाई ४५ रनले पराजित गरेको छ । लिड्समा गएराति इङ्ग्ल्यान्डले दिएको २०१ रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर
एजेन्सी, असार ३१ अर्जेन्टिनी स्ट्राइकर लियोनल मेस्सीले स्पेनी क्लब बार्सिलोनासँग आफ्नो अनुबन्धन लम्ब्याउने तयारी गरेका छन् । मेस्सीले सन् २०२६ सम्म बार्सिलोनासँगको अनुबन्धन लम्ब्याउने तयारी गरेको विदेशी सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन्
काठमाडौं, असार २७कोपा अमेरिका फुटबलको उपाधि अर्जेन्टिनाले जितेको छ । आइतबार बिहान भएको फाइनल खेलमा ब्राजिललाई १–० गोल अन्तरले हराउँदै अर्जेन्टिनाले उपाधि उचालेको हो । ब्राजिलको रियो दी जेनेरियोको माराकानो
एजेन्सी, असार ९ युरोकपअन्तर्गत समूह चरणका खेल आज सकिँदै छन्। समूह ई र एफको आज चार खेल हुँदै छन्। जुन ११ देखि सुरु भएको समूह चरणमा आज चार खेल हुँदैछन्।
एजेन्सी, असार ३ युरोपको विभिन्न ११ शहरमा आयोजना भईरहेको १६ औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा आज (बिहीबार) तीन खेलहरु हुँदैछ। युरोकपको समूह चरण अन्तर्गत आज समूह ‘सी’ को दुई खेल र